‘जात्रै जात्रा’को प्रदर्शन मिति तय | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १२:३७ लेखक नेपाली जनता
माग पूरा नभए आज ४ बजेदेखि डा. केसीको १६ औं सत्याग्रह
इलाम । आफूले राखेका सरकारले सम्वोधन नगरे आज (बुधबार) दिउँसो ४ बजेदेखि १५ औं सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनीसहित डा….
रामप्रसाद खनाल, यो नाम नेपालीहरुका लागि कुनै नौलो नाम होइन । पत्रकारिताका पाठकहरु, रेडियोका श्रोताहरु, टेलिभिजनका दर्शकहरु, गीत संगीत…
दोलखा । स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले मासिक एक अर्ब २०…
हिरासतमा ठाउँ छैन, समातेर कहाँ राख्ने ?
काठमाडौं । गत बुधवार प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा ४० जनालाई पक्राउ गर्योक। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले सोही दिन थप अनुसन्धानका…
वाइडबडी जहाजमा माहुरीको आक्रमण, ठूलो दुर्घटना ट-यो
काठमाडाैं । काठमाडाैंबाट मंगलबार दिउँसो २ सय ६ यात्रु बोकेर भारतको बैंग्लोरस्थित केम्पेगोडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको नेपाल वायुसेवा…